Indho-Cade: Haddii Afrika ku dhimanayo talada Al-Shabab, masoo dhaafeen 2012-kii - Caasimada Online
Home Warar Indho-Cade: Haddii Afrika ku dhimanayo talada Al-Shabab, masoo dhaafeen 2012-kii
Indho-Cade: Haddii Afrika ku dhimanayo talada Al-Shabab, masoo dhaafeen 2012-kii
Muqdisho (Caasimada Online) – General Yuusuf Maxamed Siyaad (Indha-Cade) oo maanta Qabuuro ku yaalla Isbitaalka Xoogga ee magaalada Muqdisho uga qeyb galay aaska Agaasimihii Radio Muqdisho Cabdicasiis Maxamuud Guuleed (Afrika), ayaa sheegay in argagixisada ay daba taagneyd marxuumka.
General Indh-Cade ayaa ugu horeyntii si tiiraanyo leh uga tacsiyadeeyay geerida marxuumka oo xalay ay Al-Shabaab ku dileen qarax Is-miidaamin ah oo lala beegsaday.
“Qof dili kara qof oo wax u dhimi kara ma jirto. Cabdicasiis haddii uu taladooda ku dhimanayo 2012 ma soo dhaafeen, laakiin Ilaahay ayaa oofsaday, qofkii sababsadayna wixii dembi uu lahaa ayuu xambaaray,” ayuu yiri Indha-Cade.
Indha-Cade ayaa sheegay in Cabdicasiis Afrika uu ahaa sida wiilkiisa oo kale, ayna khaarajiyeen niman uu ku tilmaamay Diin laa-waayal dil ugu wada xukuman yihiin dhamaan mas’uuliyiinta dowladda, howl-wadeenadeeda iyo shacabka Soomaaliyeed.
“Kuligeen ayaa u wada xukuman nimkaas, runtu waxay tahay waa wada xukumanahe nimanka ma iska dhicina, Cabdicasiis waa tagay mise sidiisa sugna oo kolba qof lagu soo booda,” ayuu yiri General Yuusuf Indha-Cade.
“Markii uu dhacay Zoobe (qaraxii) umadda Soomaaliyeed waa kacday, keliya waxay rabtay in la hor-kaco, waxaa loo baahan yahay dowlad hogaamisa umadda, dadku iskama didi karo.”
Waxa uu ku baaqay in meel looga soo wada jeesto la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab oo ayagu gumaad ku haya umadda Soomaaliyeed, islamarkaana si gaar ah u beegsada mas’uuliyiinta dowladda iyo shaqsiyaadka muhiimka ah.